Lillesjöns badplats | Nleta Hultsfred
hem » Hụ & mee » Ihe » Bada » Ebe ịsa ahụ » Ebe ịsa ahụ nke Lillesjön
Ọkacha mmasị na ezinụlọ nwere ụmụaka. Ebe a na-asa ahụ nwere jetty, ebe a na-asa ahịhịa, ụlọ mposi dị n'èzí,
3. Lillesjöns badplats, 570 84, Sweden
7. Bath & mmiri mma
Mpaghara Anụ Mmịkpọ
Ebe obibi Lillesjön, 570 84, Sverige
Nyocha 38 na Google
Ọnye na -bụ Thomas Andersson?
3/5 afọ gara aga
Dị mfe ma zuru oke mma.
Nice na idozi, ma ikuku na-eku
4/5 3 afọ gara aga
Ezigbo mma. Ezigbo osimiri nwere jetty. Na-agbanwe ụlọ na oghere echekwara nke ọma. E nwekwara obere osimiri dị ntakịrị karịa 100m site n'akụkụ akụkụ. Ahịhịa gbara gburugburu. Ọ dị mma ma baa uru na nleta!
5/5 4 afọ gara aga
Ọmarịcha obere ọdọ gbara ọhịa gburugburu ma dịkwa mma nke nwere nnụnụ bara ụba!
Aha ya bụ
Mountainzọ ugwu nke na-ajụ oyi n'ụzọ zuru oke n'ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ. Ezigbo ma lekọta ya nke ọma. Enwere ụlọ na-agbanwe agbanwe.